को हुन् नक्सल कमाण्डर हिडमा, जसलाई बीजापुर हमलाको मुख्य योजनाकार मानिन्छ ?
एजेन्सी । भारतको छत्तीसगढस्थित बीजापुरमा भएको नक्सलवादी हमलामा २२ जवानहरुको शव फेला परेको छ भने एकजना अझै बेपत्ता छन् ।
यस हमलाको पछाडि मुख्य नक्सल कमाण्डर हिडमाको नाम बाहिर आएको छ । उनी यस्ता कैयौं हमलामा शामिल रहेका छन् भने निर्मम हत्याका लागि प्रख्यात छन् । यो हमला अचानक नभएको र योजनावद्ध रहेको बताइएको छ ।
को हुन् टप नक्सल कमाण्डर हिडमा ?
हिडमा को उमेर करिब ४० वर्ष रहेको छ । उनी सुकमा जिल्लाको पुर्वाती गाउँका बासिन्दा हुन् । उनले ९० को दशकमा नक्सल हिंसाको बाटो रोजे । त्यसपछि कैयौं निर्दोष मानिसहरुको हत्या गरिसकेका छन् ।
उनी माओवादीहरुको पिपुल्स लिवरेसन गुरिल्ला –पीजीएल) बटालियन १ को हेड हुन् भने घातक हमला घटाउँदै आइरहेका छन् । उनी माओवादी दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमिटी (डीकेएसजेड)का सदस्यसमेत हुन् ।
यस्तै सीपीआई (माओवादी) का २१ सदस्यीय सेन्ट्रल कमिटीका युवा सदस्य पनि हुन् । केही रिपोर्टमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि माओवादीहरुको मिलिट्री कमिशन को चीफमा पनि उनलाई नियुक्त गरिएको छ ।
यद्यपि यो कुराको आधिकारीक पुष्टि भने भइसकेको छैन । हिडमा सँधै भूमिगत रहन्छन् । उसको हालको कुनै तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । उसको टाउको को मूल्य ४० लाख तोकिएको छ ।
हिडमासँग एके ४७ जस्तो खतरनाक हतियार रहेको छ भने उसको टिममा १८०-२५० नक्सल छन्, जसमा महिलाहरु पनि रहेका छन् । भीम मान्डवीको हत्या प्रकरणमा एनआईएले उसको विरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरेको छ ।
जनवरीदेखि जुन सम्म नक्सलहरुको विशेष अभियान
खासगरी, जनवरीदेखि जुनको महिनामा नक्सलवादीले टेक्टिकल अफेन्सिभ अभियान (टीसीओसी) चलाउँछन् । यसक्रममा सुरक्षाबलहरु खतरनाक हमलाबाट निशाना बनाउँछन् ।
यो समयमा रुखको पात झरिसकेको हुने हुनाले नक्सलवादीले टाढैबाट सुरक्षाबलहरुको गतिविधी नियाल्ने अवसर पाउँछन् । पछिल्ला थुप्रै पटक यही समयमा नक्सलवादीहरुले टीसीओसी अपरेशनबाट कैयौं जवानहरुको हत्या गरेका छन् । गत वर्ष मार्चमा सुकमा नक्सलवादीहरुले १७ जवानको हत्या गरेका थिए ।
यस्तै २०१९ अप्रिलमा नक्सलवादीले बीजेपी विधायक भीमा माडवी, उनको चालक र ३ सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेका थिए । यस्तै २०१० को अप्रिल महिनामा तडमेटलामा ७६ जवानहरुको नक्सलवादीले ज्यान लिएका थिए ।